တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ Telecom International Myanmar Co.,Ltd.(MyTel) ရုံးခြုပျသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး ခငျအောငျမွငျ့၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားလိုကျပါ၍ ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ ဒဂုံမွို့နယျရှိ Telecom International Myanmar Co.,Ltd.(MyTel) ရုံးခြုပျသို့ သှားရောကျကွညျ့ရှုလလေ့ာကွသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ MyTel ရုံးခြုပျသို့ ရောကျရှိကွရာ MyTel ၏ အမှုဆောငျအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌနှငျ့ ဝနျထမျးမြားက ရုံးခြုပျအဝငျ၌ ခရီးဦးကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။ ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ သညျ အစညျးအဝေးခနျးမ၌ Video Conference System ဖွငျ့ ဗီယကျနမျနိုငျငံ၊ ဟနှိုငျးမွို့ရှိ Viettel Group ရုံးခြုပျမှ Viettel Group Chairman ဖွဈသူ Maj. Gen. Nguyen Manh Hung နှငျ့ အပွနျအလှနျနှုတျဆကျစကားမြား ပွောကွားကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး MyTel ၏ အမှုဆောငျအဖှဲ့ဥက်ကဋ်ဌက လကျရှိဆောငျရှကျနေ သော လုပျငနျးတိုးတကျပွီးစီးမှု အခွအေနမြေားအား ရှငျးလငျးတငျပွရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက တယျလီဖုနျးဆကျသှယျရေးမှာ တိုငျးပွညျအတှကျ အရေးကွီး ကွောငျး၊ နိုငျငံဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ လမျးပနျးဆကျသှယျမှုကောငျးမှနျရေး၊ ဆကျသှယျရေးစနဈကောငျးမှနျရေးနှငျ့ လြှပျစဈဓါတျအားရရှိရေးတို့မှာ မရှိမဖွဈလိုအပျ ကွောငျး၊ မညျသညျ့လုပျငနျးလုပျကိုငျသညျဖွဈစေ အကြိုးအမွတျကိုအဓိကမထားဘဲ စတေနာထားလုပျကိုငျ ဆောငျရှကျရနျလိုကွောငျး၊ MyTel လုပျငနျးမြားကိုလညျး စီးပှားရေး အရလုပျဆောငျခွငျးထကျ တိုငျးပွညျအတှကျတဈဖကျတဈလမျးမှ အထောကျအကူပွုအောငျ ဆောငျရှကျရမညျဖွဈကွောငျး၊ အရညျအသှေးတူညီနလြှေငျ ဈေးနှုနျးသကျသာရမညျဖွဈပွီး ဈေးနှုနျးခငျြးတူညီနပေါက ပစ်စညျးအရညျအသှေးကောငျးမှနျရမညျဖွဈကွောငျး၊ ကြေးလကျဒသေမြားအထိ ဆကျသှယျမှုရရှိအောငျ ရညျမှနျးခကျြထားရှိဆောငျရှကျခွငျးသညျ ကောငျးမှနျပါကွောငျး၊ ရညျမှနျးခကျြအောငျမွငျစရေနျ လလေ့ာသုတသေနပွုမှုမြား ကို စနဈတကပြွုလုပျကွရနျလိုကွောငျးဖွငျ့ အကွံပွုတိုကျတှနျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျး စာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးသညျ။
ထို့နောကျ MyTel ၏ CEO ဖွဈသူ Mr. Nguyen Thanh Nam က ကြေးဇူးတငျ စကားပွနျလညျပွောကွားပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျအား အမှတျတရ လကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျသညျ။ ၎င်းငျးနောကျတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ MyTel ၏ ရုံးဖှဲ့စညျးဆောငျရှကျထားရှိမှု အခွအေနမြေားအား လိုကျလံကွညျ့ရှုကွပွီး MyTel ရုံးခြုပျမှ တာဝနျရှိသူမြားနှငျ့အတူ အမှတျတရစုပေါငျး ဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွပါသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် Telecom International Myanmar Co.,Ltd.(MyTel) ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Telecom International Myanmar Co.,Ltd.(MyTel) ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် MyTel ရုံးချုပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ MyTel ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဝန်ထမ်းများက ရုံးချုပ်အဝင်၌ ခရီးဦးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conference System ဖြင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့ရှိ Viettel Group ရုံးချုပ်မှ Viettel Group Chairman ဖြစ်သူ Maj. Gen. Nguyen Manh Hung နှင့် အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး MyTel ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက လက်ရှိဆောင်ရွက်နေ သော လုပ်ငန်းတိုးတက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီး ကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးတို့မှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ် ကြောင်း၊ မည်သည့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ အကျိုးအမြတ်ကိုအဓိကမထားဘဲ စေတနာထားလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း၊ MyTel လုပ်ငန်းများကိုလည်း စီးပွားရေး အရလုပ်ဆောင်ခြင်းထက် တိုင်းပြည်အတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အရည်အသွေးတူညီနေလျှင် ဈေးနှုန်းသက်သာရမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းချင်းတူညီနေပါက ပစ္စည်းအရည်အသွေးကောင်းမွန်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးလက်ဒေသများအထိ ဆက်သွယ်မှုရရှိအောင် ရည်မှန်းချက်ထားရှိဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်စေရန် လေ့လာသုတေသနပြုမှုများ ကို စနစ်တကျပြုလုပ်ကြရန်လိုကြောင်းဖြင့် အကြံပြုတိုက်တွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။
ထို့နောက် MyTel ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Nguyen Thanh Nam က ကျေးဇူးတင် စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အား အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်သည်။ ၎င်းနောက်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် MyTel ၏ ရုံးဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား လိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး MyTel ရုံးချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြပါသည်။